लेखिदिउँ–‘यो संविधान निमुखा नेपालीका लागि मात्रै हो’
संघीय सरकारका मन्त्रीले दोहोरो सुविधा लिएको खबर सेलाउन नपाउँदै फेरि प्रदेश सरकारमा बसेका मन्त्री पनि आम नागरिकको हित भन्दा राज्यको दोहनमा लागेको खबर बाहिरिएको छ । एउटा व्यक्तिमा आत्मसंयम, नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्व हुनुपर्छ । त्यो भएन भने त्यसको असर व्यक्तिमा मात्रै पर्दैन परिवार र समाजर्म पर्छ । समाजलाई गति दिन, सुशासन कायम गर्न, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर सहि दिशा प्रदान गर्न लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले नेतृत्व छान्छ । प्रतिनिधिका रुपमा उत्कृष्ठ व्यक्तिलाई सत्ताको नेतृत्वमा पठाउँछ ।
बिडम्बना त्यही ‘अगुवा….’भयो भने समाज कति दुर्घन्घित र नालायक होला ? कल्पना गर्न गाह्रो छैन । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने पनि अवस्था यही छ । हामीले नेतृत्व गर, समाजको विकास गर, समाजका लागि सुशासन कायम राख्ने सरकार चुन भनेर पठाएका सांसाद, जनप्रतिनिधिहरु यो या, त्यो नाममा, श्रीमतीका नाममा, भाइ, भान्जा, साला सालीका नाममा अनेक सुविधा लिएर बसेका परिदृश्यले समाज आजित बनेको छ । त्यतिमात्रै होइन, घर भएकाले घरभाडावाफत राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने, मन्त्रीहरुले भाइ, साला, साली, भान्जा, भतिजका नाममा सचिवालयको सुविधा लिएर राज्यलाई कंगाल बनाउने भ्रष्ट चरित्र उजागर भएको छ ।
जनप्रतिनिधिदेखि सरकार सन्चालकहरुले राज्यको दोहनमा देखाएको भ्रष्ट चरित्र सार्वजनिक भएपछि पनि उनीहरुले देखाउने निर्लज्जतामा भने कमी नआउनु अर्को बिडम्बना हो । घर भएका सांसदले आफ्नो खातामा घरभाडा वाफत पैसा आएको थाहै नभएको गैह्रजिम्मेवार जवाफ दिनु, आफैले पनि इन्धनवाफत नगदनारायण एकातिरबाट र अर्कोतिर लिटरमा पेट्रोल लिएर पनि सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ताले नै प्राविधिक त्रुटि भएको भए सच्याएर जानुपर्छ मात्रै भन्नुले यो देशका मन्त्री, सरकार जनताप्रति कति जिम्मेवार, वफादर छ ? भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
गल्ती मान्छेबाट हुनु स्वभाविक हो । एकबाट भएको गल्ती अर्कोका लागि सिकाइ हुनुपर्ने हो । एक ठाउँको गल्तीले अर्को ठाउँमा पाठ बन्नु पर्ने हो । तर केन्द्र सरकारमा भइरहेको ब्रह्मलुट प्रद्श सरकारमा पनि सिको गरिनु आश्चर्य त होइन तर नसच्याइनु भने आर्थिक अपराध र अटेरीपन हो ।
तीं गल्तीलाई सच्याउने र दण्डित गर्ने राज्यले हो । राज्य सरकारले चलाउँछ । सरकारले नै गल्ती गर्छ र त्यो गल्ती स्वीकार्दैन, बरु बनाबटी हास्यास्पद जवाफ राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले दिन्छन् भने त्यो राज्यमा थिति कसरी बस्ने ? भम्भिर विषय यो हो । अझ गम्भिर विषय त के हो भने संसारकै सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा कार्यकाल सकिएलगत्तै स्वरोजगार बनेर जीवन विताइरहेका छन् तर हाम्रा पूर्व राष्ट्रपति त के कागताली परेर सांसद भएकाहरु प्नि आजिबन राज्यबाट पेन्सन खाने दाउमा बसेका देखिन्छन् । यस्ता लोभी, पापी चरित्रले राज्यको दोहोन त हुन्छ नै मुलुकमा नैतिकवान नागरिक निर्माणमा पनि वाधक बनिदिन्छ । जब नेतृत्व नै जे जसरी हुन्छ, राज्यको दोहन गर्ने, आफू भरिपूर्ण हुने जनता जाय भाडमाको चरित्रमा देखिन्छ अनि त्यो देशका नागरिकले सिक्ने के ?
के कानुन देशका निमुखा, कमजोर र पहुँच नभएका नागरिकका लागि मात्रै हो ? हो भने संविधानमा जे जस्तो लखिएको भए पनि त्यसलाई संसोधन गरेर लेखिदिऊँ, ‘यो संविधान शक्तिशाली, सत्ताशिन र उच्च तहमा बस्नेहरुका लागि होइन, निमुखा नेपालीका लागि मात्रै हो’ भनेर । होइन भने कानुनी राज्यमा भ्रष्ट, नैनिकहीन, अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई एक मिनेट पनि ओहोदामा बस्ने हक दिइनु हुँद